Shiinaha FOTON BJ6802 / BJ6902 warshad iyo soosaarayaasha | Foton
8-9M SERIES TABABAR
Tababaraha taxanaha Foton BJ6802 / BJ6902 waa nooca la casriyeeyay ee badeecada bislaada Foton. Waa xasiloon, raaxo leh, awood badan, waxtar badan iyo tamar-badbaadin ah. Waxay bixisaa hufnaan, adkeysi leh, ammaan ah, bey'adeed oo ku habboon dhammaan xallinta xalka gaadiidka rakaabka.
Guud ahaan Cabbirka 8995 * 2450 * 3300
Culayska Curb 9.1T
Awood Fadhi 35 + 1
Tababaraha taxanaha Foton BJ6802 / BJ6902 waa nooca la casriyeeyay ee badeecada bislaada Foton. Waa xasiloon, raaxo leh, awood badan, waxtar badan iyo tamar-badbaadin ah. Waxay muujineysaa muuqaalka moodada iyo xarrago leh, qurxinta gudaha ee raaxada leh, taasoo siinaysa rakaabka khibrad safar oo aamin ah.
BJ6802 / BJ6902 wuxuu la dhacsan yahay waddo-kar sare oo hufan iyo koronto-shidaal hufan. Waxqabadka mashiinka oo kordhay isticmaalka hoose; waddo farsamo qaan-gaadh ah oo ka timaadda hawl-karnimo badan.